merolagani - आठ कम्पनीको ४ अर्ब बराबरको हकप्रद शेयर आउँदै, कुन कम्पनीको कति ?
आठ कम्पनीको ४ अर्ब बराबरको हकप्रद शेयर आउँदै, कुन कम्पनीको कति ?
Oct 17, 2018 Merolagani
आठ कम्पनीको ३ अर्ब ८३ करोड २ लाख ७४ हजार ४५० रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ८३ लाख २ हजार ७४५ कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्ने भएका छन् । हकप्रद जारी गर्न ती कम्पनीले धितोपत्र बोडमा अनुमति माग्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
हकप्रद जारी गर्न अनुमति मागेको कम्पनीमध्ये अपी कम्पनी पावर कम्पनीले सबैभन्दा धेरै २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्न अनुमति मागेको छ ।
कम्पनीले चुक्ता पूँजीको २०० प्रतिशत बराबरले हुन आउने २ करोड १० लाख कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न लागेको छ ।
त्यस्तै श्रीराम सुगर मिल्सको चुक्ता पूँजीको ३०० प्रतिशत अर्थात ८९ करोड ३ लाख ९४ हजार ९८१ रुपैयाँ बराबरको एक सय रुपैयाँ अंकित दरमा ८९ लाख ३ हजार ९५० कित्ता हकप्रद निष्काशन गर्न लागेको छ ।
बरुण हाइड्रोपावरले २५ करोड ५१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको २५ लाख ५१ हजार पाँचसय कित्ता हकप्रद जारी गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले शतप्रतिशत अर्थात चुक्ता पूँजी बराबर नै हकप्रद निष्काशनको तयारी गरेको हो ।
सृजना फाइनान्सको चुक्ता पूँजीकोे ६० प्रतिशत हकप्रद पनि बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको छ । फाइनान्सले २४ करोड ४ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको २४ लाख ४ हजार ८० कित्ता हकप्रद जारी गर्ने भएको छ ।
नाडेप लघुवित्तले पनि शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीको १६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी बराबर रकमको १६ लाख कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न लागेको छ ।
उता बीमा समितिले तोकेको चुक्ता पूँजी कायम गर्न र ५१ प्रतिशत संस्थापक स्वामित्व कायम गर्ने चेपुवामा परेको एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले पहिलो चरणमा चुक्ता पूँजीकोे १०५ प्रतिशत संस्थापक हकप्रद निष्काशन गर्न बोर्ड समक्ष पुगेको छ ।
कम्पनीले १४ करोड ३ लाख ३२ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको १४ लाख ३ हजार ३२५ कित्ता संस्थापक हकप्रद जारी गर्ने भएको हो । संस्थापक पश्चात फेरी हकप्रद निष्काशन गरेर एक अर्ब पूँजी कायम गर्ने बाध्यता कम्पनीलाई छ ।
मिथिला लघुवित्तको चुक्ता पूँजीकोे ५० प्रतिशत बराबरको ३ करोड २९ लाख ८८ हजार ९६९ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्न अनुमति माग गरेको छ । कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित दरमा ३ लाख २९ हजार ८९० कित्ता निष्काशन गर्न लागेको हो ।
उन्नति माइक्रोफाइनान्सले चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशतले हुन आउने एक करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको एक लाख १० हजार कित्ता हकप्रद जारी गर्ने नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा अनुमति माग्दै धितोपत्र बोर्ड पुगेको हो ।
सिभिल लघुवित्तको हकप्रद शेयरमा आजदेखि आवेदन दिन सकिने
Aug 09, 2020 05:40 AM
सिभिल लघुवित्तले साउन २५ गतेदेखि शत प्रतिशत हकप्रद बिक्री गर्ने
Jul 21, 2020 07:33 AM
गुराँस लाइफको हकप्रदमा आजसम्म आवेदन दिन सकिने
Jul 19, 2020 07:51 AM
शिखर इन्स्योरेन्सको हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
Jul 19, 2020 07:14 AM
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको शतप्रतिशत हकप्रद शेयरमा कहिलेदेखि दिन सकिन्छ आवेदन?
Jun 22, 2020 08:47 AM
एनएलजी इन्स्योरेन्सले स्थगन गरेको हकप्रद शेयर पुनः बिक्री खुला गर्ने, कहिलेदेखि दिन सकिन्छ आवेदन?
Jun 21, 2020 08:01 AM
पछिल्लो २४ घण्टामा थप चार जनाको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको छ । योसँगै देशभरमा हालसम्म ९५ जनाको निधन भइसकेको छ ।
१५ दिन सरकारी कर्मचारी 'वर्क फर होम"मा,अत्यावश्यक काम बाहेक सबै बन्द
नेप्से साढे १६ अंक घट्दा पनि दुई कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट
Aug 13, 2020 04:05 PM